ETHUSD Hijery $ 220.00 Fanohanana
Ethereum dia manomboka iharan'ny tsindry ambanin'ny haavon'ny $ 230.00 satria mihena ny tsena Bitcoin sy ny tsena cryptocurrency lehibe amin'ny zoma. Fiatoana eo ambanin'ny ambaratonga fanohanana $ 220.00 ...
GBPUSD 1.2390 Fanohanana lehibe
Ny kilao anglisy dia hita fa mihamalemy amin'ny dolara amerikana tamin'ny zoma lasa teo satria tsy nahavita nifandoka ireo faritra teknika 1.2390. Ny mpivarotra GBPUSD dia afaka manomboka mikendry ireo tanjona ...
Fampahatsiahivan'ny maraina an-tsena: Mey hanakaiky ny fanohanan'ny Term amin'ny 1.12
STOCKS Dow sy DAX dia niondrika tamin'ny ambany ambany tamin'ny androny omaly izay nilaza fa hividy tombony amin'ny haavo ambany kokoa. Izany dia mitazona ny fomba fijery lehibe kokoa amin'ny fizarana ara-bola. Fivondronana iray ...
Nirotsaka tamin'ny fiadanam-batravatra ny solika WTI taorian'ny nahalany 8% mahery tao anatin'ny telo andro
Ny solika WTI dia nihetsika mihoatra ny $ 38 isaky ny barika taorian'ny fanitarana ny fisintonana avy amin'ny haavo 15 herinandro vaovao (41.61 $ $ teo aloha) androany. Nihena 37% ny solika tao anatin'ny telo andro tamin'ny ...
Fijery GBP / USD: Ny orsa dia mitondra otrikaretina amin'ny stock stock avo kokoa
Ny tariby dia nahatratra ny vidin'ny stock Eropeana avo kokoa ny alakamisy ary nitazona orsa taorian'ny lavo 0.8% tamin'ny andro teo aloha. Ny hetsika eo akaiky eo dia averina amin'ny fihenan-kery vaovao sy ny tsy manara-penitra isan'andro ...
Ny vidin'ny volamena dia milahatra avo lenta isan-taona, 1,800 toa $ mety
Ny vidin'ny Key Highlight Gold dia nanomboka fihetsiketsehana vaovao ary nivarotra tamin'ny taona vaovao avo lenta hatramin'ny $ 1,780. Ny fanohanana mafy dia miforona eo akaikin'ny $ 1,750 ary $ 1,745 amin'ny 4 ora ...
Ny Crawls an'ny EURGBP manakaiky ny tsipika amin'ny làlana, mifikitra amin'ny hitsangatsangana
Nivadika avy amin'ny faritra ambony ambonin'ny rahona Ichimoku ny EURGBP ka hatramin'ny 0.9031, dia ilay 38.2% Fibonacci fiankinana amin'ny tongotra miakatra hatramin'ny 0.8281 ka hatramin'ny 11 taona ...
Sarin-tsarin'i NZDUSD Làlan-dranomasina, Crawls amin'ny sisin-dàlana
Ny NZDUSD dia mitodika eny an-dàlana satria mijanona ao amin'ny fomba miato izay nahafehy ny fiakarana fiakarana, misy koa hita taratry ny tsipika mena Tenkan-sen. Mbola misy marika tsara ...
Fampirantiana EURCHF Famantarana famantarana ho an'ny fanamafisana mitohy
Nahita fehezam-bolo i EURCHF tamin'ny ambaratonga 1.0635, ka izany no fatran'ny 23.6% Fibonacci fiankinan-dàlana ambany 1.1058 hatramin'ny 1.0504. Tsy nahazaka ny nanitsy ...
USDCAD Tsy voatery handresy ny Flat SMAs; Negative ao amin'ny Medium Mediam
Ny USDCAD dia toa mihena ao anatin'ny tapa-bolana lasa fa izao dia miakatra ny haavon'ny fihoratry ny Fibonacci 23.6% amin'ny tongotra ambany avy amin'ny 1.4170 ka hatramin'ny 1.3315 amin'ny 1.3518, ao anaty ...
Loharano volafotsy: Mijanona ho matanjaka ny Bias
Pivot (fanilikilihana): 17.6400 Ny soso-kevi-pitantsika Long positions above 17.6400 miaraka amin'ny tanjona ao amin'ny 17.8800 & 18.0300 amin'ny fanitarana. Sehatra misongadina eto ambany eto 17.6400 mitady fika-lavitr'ity 17.5400 & 17.4300 ity ...